U-Nieves Concostrina: indaba efanayo, enye indlela yokutshelwa | Izincwadi Zezindaba
UJuan Ortiz | 08/01/2022 21:45 | Abalobi, Amabhuku, I-Novela
Ingcaphuno ka-Nieves Concostrina
U-Nieves Concostrina ungumlobi ovela eMadrid owaziwa ngendlela yakhe yokuqala yokutshela izehlakalo zomlando. Selokhu yasungulwa, inhloso yayo bekuwukukhombisa izehlakalo ngendlela ehlekisayo, ukushiya eceleni imibono ecatshangwayo yemibhalo efundisayo. Isampula yalokhu yincwadi yakhe yakamuva: Umlando osenkingeni (2021), engajatshulelwa yinoma yimuphi umuntu omdala, naphezu kokuba engowohlobo lwezincwadi zezingane.
Ngeminyaka engaphezu kweshumi emkhakheni wezincwadi, ushicilele izincwadi eziyisishiyagalolunye. Phuma phakathi kwalokhu: Uthuli wena (2009) futhi Izindaba ezincane zomlando (2009). Ngokunjalo, usevune umsebenzi wobuntatheli oncomekayo kuyo yonke iminyaka yakhe engama-40 yolwazi emsakazweni nakumabonakude, ngokusebenza kwakhe uthole imiklomelo ebalulekile, njengokuthi: I-Villa de Madrid yobuntatheli emaphephandabeni abhaliwe (1998) kanye no-Ondas ngolwazi olungcono kakhulu. ukwelashwa ngo-2016.
1 Izincwadi zikaNieves Concostrina
1.1 Uthuli wena (2009)
1.2 Izindaba ezincane zomlando: ama-anecdotes, umbhedo, i-algar adas kanye ne-mamarrachadas yesintu (2009)
1.3 Ukufa Okunezithombe Zobuntu (2012)
1.4 I-San Quintín nezinye izindaba ezincane zomlando zahlanganiswa (2012)
1.5 U-Antonia (2014)
1.6 Umlando Osenkingeni: Okuphawulekayo okungu-5, Oku-4 Okuvelele, kanye Ne-Cress (2021)
2 Mayelana nombhali, u-Nieves Concostrina
2.1 Imiklomelo enikezwe u-Nieves Concostrina
Izincwadi zikaNieves Concostrina
Uthuli wena (2009)
Liyincwadi enendikimba ethize engajwayelekile, kahle ngezigameko okwadlula kuzo izidumbu zabantu abathile izenzakalo ezibalulekile emlandweni. Lo mbono othile, kusengaphambili, wenza umsebenzi uzibuthe kwabafuna ukwazi. Phakathi kwamakhasi ayo kunenani elikhulu lezindaba, ezihlanganiswe ezahlukweni eziyisikhombisa ezilandelayo:
Ipolitiki, ama-chevrons kanye ne-adventure
Showbiz, rock kanye nezemidlalo
Omunye omubi omunye omuhle
Isahluko sokugcina sigqama kwezinye ngokuqukethwe kwaso; Ihlukaniswe yaba izingxenye eziyi-19 futhi inezindaba ezimnandi kakhulu. Phakathi kwazo kukhona: “Ukuthunjwa kwezidumbu ”,“ Izehlukaniso zangemva kokufa ”,“ I-mafia iyabulala”, "Ufile Jeweled", "Funerary Gazapos" kanye "Ukwenziwa kabusha".
Esanduleleni somdlalo, umbhali Wazwakalisa: “Ngale ncwadi ngihlose ukukhombisa kuphela ukuthi ukufa (kwabanye) kungaba okuthakazelisa, okuwubukhazikhazi noma okujabulisayo njengokuphila ngokwako. Futhi kwangathi uNkulunkulu, noma ubani, angasibamba avume ”. Yini enye, Wachaza ukuthi wayeyithuthukisa kanjani le ncwadi cishe iminyaka eyishumi nokuthi ulwazi lwakhe lobuntatheli lwalubalulekile.
Phakathi kwezindaba esingazithola yilezi:
"U-Alexander I, umbusi ofile futhi wanyamalala" (1777 - 1825)
"UJohn XXIII, owagqunyiswa ngokuphelele" (1881 - 1963)
"UPythagoras, indoda efile enenkohliso" (ngekhulu lesi-XNUMX - XNUMX BC)
"Umama ongumkhohlisi kaFrancisco Pizarro" (1471? - 1541)
"Umngcwabo" inqolobane "kaMarilyn Monroe" (1926 - 1962)
"U-Pablo Escobar, ukuthunjwa kwe-sluppy" (1949 - 1993)
Izindaba ezincane zomlando: ama-anecdotes, umbhedo, ama-algarias neziwula zesintu (2009)
Le ncwadi - eyesithathu evela eMadrid - yethulwe ngemuva kwempumelelo ye Uthuli wena. Kuzo zonke izahluko zayo eziyi-13, uConcostrina uchaza ngokuncokola nangokucophelela izehlakalo ezimbalwa eziphazamisa ngempela.. Phakathi kwezindaba ezihlukahlukene ezixoxwayo kukhona: "Algaradas", "Uthando, izindaba zothando kanye nama-shenanigans", "Mamarrachadas", "imibuzo ye-Mundane" kanye ne "Revoltosos".
Njengasencwadini yakhe yangaphambilini, umlobi wayefuna ukukhombisa izenzakalo ezithile emlandweni wesintu ngendlela ehlukile, ngaphandle “kwezemfundo” ezingaka, ukuze afinyelele abafundi ngokuphumelelayo. Esethulweni sakhe waphikisa wathi: “Kuyimivimbo emincane yebhulashi ehloselwe kuphela ukusiza ukuveza ilukuluku nokuphusha, ngethemba, ukuphuza emithonjeni eyengeziwe yokufunda ”.
Izindaba ezincane ze...
Ukufa kwabantu okunezithombe (2012)
Yincwadi yesine yombhali. Yanyatheliswa kuqala njenge Uthuli wena II, njengoba ilandela umugqa ofanayo wombhalo we-homonymous wango-2009. Phakathi kwezigameko ezingalindelekile okudlula kuzo imizimba yabalingisi kukhona iziqeshana ezithokozisayo egcwele ihlaya lesici sombhali. Ngaphezu kwalokho, iziqephu ezihlekisayo ziphelezelwa yimifanekiso kaForges.
Ezinye zezindaba esingazithola yilezi:
"I-Round Trip Skull kaJoseph Haydn"
"Ugebhezi oluzidlayo lukaFrancisco de Quevedo"
"UCésar Borgia ocindezelekile"
Ukufa Okuboniswayo kwe ...
Eyodwa ye-San Quintín kanye nezinye izindaba ezincane Zomlando zahlanganiswa (2012)
Kuyiqoqo lezehlakalo - amaphutha nobulwane - ezenzeke kusukela ekubhalweni kwavela ngokusemthethweni eminyakeni engaba ngu-5000 edlule, okuholele ekutheni umlando owaziwayo. Ngokuphambene nezinye izincwadi ezimbili, lena iveza izimo ezenzeka “empilweni.”
Umshicilelo ohlekisayo wombhali usaqhubeka endabeni ngayinye. Ama-protagonists angaphansi kwezigaba ezahlukene zomphakathi kanye nezindawo zemizamo yabantu, ukuze phakathi kwemigqa yencwadi kube: osopolitiki, osaziwayo, ama-nuncios, abaphathi kanye nezibalo zasebukhosini. Kuyaphawuleka ukuthi, nakuba izici zomlando ezaziwa kabanzi kuxoxwa ngazo, umbhalo unokuqukethwe okungashicilelwe lokho kuzomangaza ngaphezu kokukodwa.
Le ncwadi inezahluko eziyi-16 lapho kusatshalaliswa inqwaba yezindaba okuqukethwe kwazo okuhlukahlukene. Sizofakaza: izimpi, imizabalazo yamabandla, izibhelu emadolobheni ... Lezi ezinye zezindaba:
"UClaudica owasinda uClaudio"
"Santiago, umthelisi onganeliseki"
Kuyisiqalo sombhali ohlotsheni lokulandisa kwemibhalo. Le noveli ilandisa ngendaba kanina, u-Antonia, owesifazane owafika emhlabeni lapho iSpain ibhekene nesikhathi esinzima. - ekuqaleni kwawo-1930. Ngalo msebenzi, u-Concostrina wayefuna ukukhokha intela kubo bonke abesifazane abalwela impilo engcono yezingane zabo phakathi neMpi Yombango YaseSpain kanye neminyaka elandelayo.
Umbhali, ikhasi nekhasi, uchaza obuningi bobunzima umndeni wakhe owadlula kubo ngesikhathi ekhulisa unina, nokuthi lokhu kwenzeka kanjani, emva kwalokho, kweqa i okuqhubekayo ubufakazi bokuthi impilo emethula. Njengenjwayelo kumbhali, indaba igajwe amahlaya kanye nokuthinta okuhlekisayo, lokhu ukuze kuthambise kancane izimo zokuchitha igazi obekumele azilandise.
Umlando Osenkingeni: 5 Okuphawulekayo, 4 Okuvelele, kanye neCress (2021)
Lena incwadi yokugcina ka-Concostrina. Indaba emfishane yempilo yabantu abayishumi abagqamile abaphawule umlando inikezwe embhalweni.. Umbhali ugcizelela imizabalazo yemibono yomlingiswa ngamunye ezimweni ezehlukene okwakumele anqobe kuzo. UMiguel Ángel, uMarie Curie, uCervantes, Oscar Wilde, U-Isabel de Braganza kanye no-Fernando VII bangabanye bezinhlamvu ezitholakala emigqeni yabo.
Umsebenzi—ogcina isitayela esihlekisayo sombhali— ungowohlobo lwezingane ezisanda kuzalwa. Engxoxweni no-Efe, u-Concostrina ubeke amazwana: «Uma ngibhala umbhalo womlingiswa, angicabangi ukuthi uyahlekisa, ngibheka izindaba ezithakazelisayo«. Ukulandisa ngakunye kuhambisana nemifanekiso ka-Alba Medina Perucha.
Ezinye zezindaba ezifakwe encwadini yilezi:
"Indlela uMichelangelo agcina ngayo uyise kaDavid, isithombe esingasiqalanga"
"Cervantes ekuthunjweni kwakhe"
"I-Isabel de Berganza umdali we-El Prado"
Mayelana nombhali, u-Nieves Concostrina
U-Nieves Concostrina Villarreal wazalwa ngoLwesibili, Agasti 1, 1961 eMadrid, eSpain. El Idayari 16 Kwakuyisikole sakhe sobuntatheli, lapho asebenza khona kusukela ngo-1982 kuya ku-1997. Kamuva, waqhubeka nomsebenzi wakhe kweminye imidiya yethelevishini, njenge I-Antena 3. Uphinde wagqama emsakazweni ngokuthi: "Polvo Eres" by radio 5 futhi "Akulona nje noma yiluphi usuku" by radio 1.
Ngo-2005 wethula umsebenzi wakhe wokuqala njengombhali: ... futhi uyoba othulini, ibhuku lesithombe se-epitaph. Kusukela lapho washicilela ezinye izincwadi eziyisishiyagalombili, ezihlukaniswa ngesitayela sazo esingavamile namahlaya. Eminye imibhalo yombhali:
I-Quijostorias encane (2016)
Isikhathi esidlule esingaphelele (2018)
Imiklomelo enikezwe u-Nieves Concostrina
Ukuqashelwa komphakathi bekuyinto engavamile kumbhali. Nazi ezinye izindondo asezitholile:
2005 XX Andalusia Prize for Journalism, ngendlela yayo yomsakazo, evela kuJunta de Andalucía
2010 Imakrofoni yegolide eklonyeliswe yiSpanish Federation of Radio and Television Associations
I-Progressive Women Award yango-2021 esigabeni Samasiko, eklonyeliswe yi-Federation of Progressive Women
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Nieves Concostrina: izincwadi